Umatshini wexesha akakwazanga ukwenza ukhuphelo. Ingxaki ngesisombululo esinzima | Ndisuka mac
Umatshini wexesha akakwazanga ukwenza ukhuphelo. Ingxaki ngesisombululo esinzima
Kule veki emva kwezi ntsuku zeholide iMac ekhaya ibiphume ngaphezulu kwesiqhelo kwaye asitsho ukuba le yeyona nto ibangele impazamo evela kwezinye iiMacs kwaye yenziwa ngeekopi zokugcina kuMatshini, ngokulula cinga ukuba le yinto eyenzekileyo. Kwimeko yam, impazamo ebonakale izolo emva kwemini kwiMac yam iphela isusa ngokuthe ngqo yonke imixholo yogcino kwaye iphinde yahlule i-hard drive yangaphandle yokugcina ikopi yogcino lweMac yam.Ibonakala ngathi ingxaki yayikwidiski kodwa Nokuba yeyiphi na imeko inokuba yingxaki ngesisombululo esimbaxa xa umyalezo uvela: Umatshini wexesha akakwazanga ukwenza ukhuphelo.
Ngamafutshane, ukuba asinangxaki nge-Mac, ingxaki kuphela kukuba zonke iikopi zokulondoloza zinokuchaphazeleka, into engafaki ngxaki kubasebenzisi abaninzi kodwa enokuthi icaphukise ukuba siyathemba ukuba sinayo ikopi yexesha elidlulileyo eligcinwe kwidiski. Kwimeko yam le miyalezo yavela xa uqala iMac emva kweholide nasemva kokuzama ukufumana ulwazi kwakhona Kwidiski:
Ukubona lempazamo, ndizama ukwenza ikopi yediski kwenye idiski kodwa ngenxa yaso nasiphi na isizathu andiphumelelanga nangayiphi na indlela, kungoko kuye kwafuneka ndicime idiski "ngokulahleka kwazo zonke iikopi ezigciniweyo" setha enye idiski ukugcina iikopi zoMatshini weXesha. Kwimeko yam kufuneka ndicacise ukuba andiyisebenzisi idiski yangaphakathi ye-Mac, bendisebenzisa idiski yangaphandle kwaye inokuba yingxaki, kodwa okwangoku idiski ebendiyisebenzisa kwiikopi ayinikiwanga ilinde ukubona ukuba Ndingayifumana ingxaki yokusebenza kwayo. Le diski iqulethe izahlulelo ezibini, iTime Machine enye nenye endineefayile zangaphandle kunye namaxwebhu angonakalanga, Inxalenye nje emiselwe uMatshini weXesha ichaphazelekayo.
Ukuba oku kuyenzeka kuwe ngaphambi kokwenza nantoni na kufuneka ukhawuleze sebenzisa enye idiski kwaye uyisebenzise njenge-backup, Cinga ukuba ixesha elide singenayo ikopi, ukhetho oluninzi kufuneka siphulukane nayo yonke into esinayo kwi-Mac ukuba kukho impazamo. Kwimeko yam ndiyayiqonda ukuba yingxaki yediski kodwa kuyamangalisa ukuba ayikho ngaphezulu kwesahlulelo esithile ndiza kuzama ukubuyisa idatha kunye nefomathi yediski kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Umatshini wexesha akakwazanga ukwenza ukhuphelo. Ingxaki ngesisombululo esinzima
Franctastic Franctastic sitsho
Ikopi yeCarbon Cloner!
Phendula kwi-franctastic franctastic
URodrigo Camacho sitsho
eyenzeka kum rhoqo kwaye eyona nto imbi kukuba akukho hlaziyo lukulungisa oko
Phendula uRodrigo Camacho
Andazi nokuba kwenzeke ngengozi. Kodwa emva kokubuya eholideyini nokumisa ikhompyuter yam kwiintsuku ze-5 ndiye ndadibana nengxaki efanayo.
UAlejandro De Castro sitsho
Into efanayo eyenzekayo yenzeka kum kwi-mini mini ene-disk yangaphandle. Eyona nto ibuhlungu kukuba yenzekile kum amaxesha ngamaxesha kwaye iApple ayiniki mpendulo nzulu.
Oku kundikhokelela ekubeni ndikhangele eminye imithombo yeendaba ekhuselekileyo, enjengokugcina ilifu (iGoogle Drayivu, iSydydive, iDropbox, njl.
Imibuliso evela eRosario, eArgentina.
Phendula kuAlejandro De Castro
Nika iApple yakho ukubukela ukubamba iinkuni ngale micu
Uhlaziyo luka-Apple lokujonga kuqala iTekhnoloji yoVavanyo kuguqulelo 28